Amnesty International oo war ka soo saartay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Amnesty International oo war ka soo saartay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya
Amnesty International oo war ka soo saartay xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya
Hay’adda caalamiga ah ee u dooda xaquuqul aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ku qasbeyso qaxootiga Soomaalida ah ee kunool xeryaha Dhadhaab inay Soomaaliya aadaan.
hay’adda ayaa waxaa ay xaaladda dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ka soo saartay war-bixin dheer oo ay kaga hadashay dhinacyo badan.
waxaa ay sheegysaa in saraakiisha dawlada Kenya ay u sheegaan qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab in hadii aysan si is kood ah ugu laaban Soomaaliya dhammaadka bishaan ka dib la qasbi doono.
Amnesty waxay tilmaantay in hay’adda QM gaar ahaan laanta UNHCR oo ay sheegtay inaysan si wanaagsan usiin qaxootiga xogta saxda ah ee halista colaadeed ee jirta.
Hay’adaha u dooda xuquuqul insaanka dhowr jeer ayay ku cil ciliyeen in Soomaaliya hadda la joogo aysan haboonayn in qaxootiga dib loogu soo ciliyo.
AI ayaa sheegtay in arrimaha guriyeynta iyo maciishaduba ay ciriiri yihiin gudaha dalka Soomaaliya waqti xaadirkaan.
Afhayeenka dawladda Kenya Eric Kiraithe, ayaa beeniyay in qaxootiga qasab lagu lagu culinayo, isagoo sheegay in badan oo qaxootiga Dhadhaab ah ay si iskood ah u doonayaan inay Soomaaliya ugu laabtaan.
In badan ayaa dawlada Kenya ay kusoo celcelisay in xeryaha Dhadhaab la xiri doono bishaan Nofeembar.
” Waxaan Dhadhaab u dirtay guddi xaqiiqo raadin ah oo la kulmay 56 qof oo qaxootiga ka tirsan, waxaa ay inoo sheegeen in loo hanjabo, taasi oo ka baxsan xuquuqda aadanaha iyo shuruucda Caalamiga ah” ayay Amnesty International sheegtay.
Hay’adda oo soo xiganaysa ruux qaxooti ah oo Soomaliya dib loogu soo ciliyay ayaa sheegtay in dadka qaarkood markii lagu ciliyay Soomaaliya ay la kulmeen dhibaato badan oo ay ka mid yihiin in la dilo ama la askareeyo.
“Markaan ku laabanay Soomaaliya Aabaheena ayaa horteena lagu dilay, Al-shabaabna waxaa ay nagu qasbeen inaan askar u noqono, waana sababta xerada dib iigu soo ciliyay” sidaa waxaa Hay’adda u sheegay dhalinyero da’dooda ay u dhaxeeyso 15 -18 sano.
Dadkan dhalinyerada ah ayaa Soomaaliya lagu soo ciliyay bishii koowaad ee Sanadkan 2016 ka.
Michelle Kagari, oo Amnesty u qaabilsan Geeska Africa iyo wadama Harooyinka ayaa sheegay in xiligan Soomaaliya gudaheeda ay ku barakacsan yihiin 1.1 million oo barakacaayl ah, kuwaasi oo aan helin taageero rasmi ah.
UNHCR ayaa sheegtay bilihii July iyo August, ee sanadkan in 25% dadka qaxootiga ah ay qorshaynayaan inay dalkooda ku laabtaan.
Kenya ayaa waxaa ay ka mid tahay wadamada ugu badan ee qaxooti martigaliya, ayadoo 10 wadan oo kenya ku jirto ay magangalyo siiyeen 21 million oo qof.
Dowladda Kenya ayaa marti-galisay 500,000 kuwaasi 330,000 ka mid ah Soomaaliya ka soo jeedaan, 260,000 ka mid ah waxaa ay ku nool yihiin xerada Dhadhaab.
Previous article“NOWHERE ELSE TO GO: FORCED RETURNS OF SOMALI REFUGEES FROM DADAAB REFUGEE CAMP” AMNESTY INTERNATIONAL
Next articleDiyaaradda Air Djibouti oo duullimaadyo toos ah ka bilowday Magaalada Moqdisho